काभ्रेमा मृत दम्पत्तिकाे शव फेला
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ तल्लो हटियामा एक दम्पती घरभित्र मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकाटोका अनुसार नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ तल्लो हटियामा ५५ वर्षका श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र अन्दाजी ५० वर्षकी रुकुमाया श्रेष्ठको घरभित्र नै शव फेला परेको हो ।
मंगलवार राती भएको घटना आज बिहान थाहा पाएपछि अहिले प्रहरीले सो घरमा कसैलाई पस्न दिएको छैन । घटनास्थलमा बियरको बोतल फुटेको अवस्थामा भेटिएको र मृतकको शरीरमा धारितो हतियार प्रहार भएको जस्तो देखिएको प्रहरी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए । अनुसन्धान गर्न माथिबाट तालिम प्राप्त कुकुर मगाएको उनले बताए ।
घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको हुनसक्ने सापकोटाको भनाइ छ । सिरकले छोपेको अवस्थामा क्षतबिक्षत शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा बियरका बोतल, गाँजा र सुर्तीको धुलो छरिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घरमा नै किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका दम्पतीले मदिरा समेत बिक्रि गर्दै आएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । घटना बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रमुख सापकोटाले बताए ।